Qaabdhismeedka Wax Barashada | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Gobolka Minnesota, Degmooyinka waa inay gaaraan go'aannada maxalliga ah ee ku saabsan sida heerarka gobolka wax loo bari doono, waxaanna u isticmaalnaa geeddi-socodka fahamka Nidaamka Naqshadeynta (UbD) inaan diiradda saarno barashada lagama maarmaanka ah (heerarka laga ansaxiyay gudaha), qiimeynta guud ee guud (waxqabadka ku saleysan), iyo ka qayb qaadashada khibrado waxbarasho (iyada oo loo marayo Qaab-dhismeedka Wax-barashada). Habka khariidaynta manhajka UbD wuxuu siiyaa hogaamiyaasha tusmada agabyada abaabulka iyo la xiriirida qorshooyinka Degmooyinka ee wax looga qabanayo heerarka mawduucyada gobolka.
Iswaafajinta nidaamka ee aaladaha khariidaynta UbD waxay qoysaska siisaa manhaj damaanad leh oo macquul ah. Waxaan u adeegsanaa xogta qiimeynta maxalliga, gobolka iyo qarankaba si aan u qiimeyno waxtarka barnaamijkeena tacliimeed iyo inaan dib u eegis ugu sameyno natiijooyinka si joogto ah Waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqeynaa isbeddelada aag kasta oo mawduuc ah oo ku saabsan wareegga toddobada sano. Isbeddeladan waxaa loo soo bandhigayaa Guddiga Dugsiga ee kulanka dadweynaha, dhammaan talooyinka la oggolaadayna waxay noqdaan khariidadda shaqada mustaqbalka ee aagga. Unugyada UbD ee lagu soo saaray koorso kasta oo hor-marta Guddiga Dugsiga si loo oggolaado ayaa ah caddeynta ballanqaadka shaqaalaha ee natiijooyinka barashada.
Marxaladda Koowaad waxay bixisaa macluumaad ku saabsan barashada aasaasiga ah iyo su'aalaha lama huraanka ah, waxaana si isdaba joog ah loogu adeegsadaa - ama lagu baraa - guud ahaan Degmada. Hoggaamiyeyaasha mawduucyada waxay ku daraan heerarka gobolka barashada lagama maarmaanka ah iyagoo isku dayaya inay mudnaanta siiyaan shaqadooda, iyagoo xoogga saaraya dhinacyada ka kooban mawduucyada u baahan diiradda gaarka ah. Marxaladda Koowaad waxaa ka mid ah cunsurka muhiimka ah “su’aalaha lama huraanka ah,” kaas oo ku dadaalaya in barashada loogu daro su'aalo caalami ah ama baaxad weyn leh haddana macno u leh ardayda.
Marxaladda Labaad waa aagga lagu caddeeyo caddaynta barashada iyada oo loo marayo qiimeyn qaabeed iyo mid kooban iyo labadaba qiimeyn dhaqameed iyo waxqabad ku saleysan. Qiimeynta guud, oo ah qiimeyn la geeyay laguna falanqeeyay fasalada oo dhan, waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka qiimeynta barnaamijka.
Marxaladda Saddexaad waa qorshaha waxbaridda ee cutubka, iyo khariidado si toos ah ugu habboon barashada / su'aalaha ku jira Marxaladda Koowaad iyo caddeynta lagu qabtay Marxaladda Labaad. Qaab dhismeedka waxbariddu waxay bixisaa hagitaan loogu talagalay qaabeynta khibradaha ardayda inta lagu jiro geedi socodka qorshaynta cutubka. Marxaladda Saddexaad waxay bixisaa macluumaad isku xigxiga iyo sidoo kale faahfaahin ku saabsan lagama maarmaanka iyo / ama ilaha la heli karo. Waxaa muhiim ah in la ogaado in Marxaladda Saddexaad ay tahay hage mana aha mid loo qoro dabiiciga. Macallimiinta waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay qaabeeyaan khibradaha waxbarasho ee sida gaarka ah ugu wajahan ardayda hortooda ah.
Agaasimaha Manhajka iyo Tacliinta
Waxaad sidoo kale ku soo gudbin kartaa su'aalaha iyo jawaab celinta khadka tooska ah waxaadna ku heli kartaa jawaab hal maalin ganacsi gudaheeda adoo maraya Aynu Wadahadalno.
Baridda iyo Barashada /